Maamulka iyo dhalinyarada gobolka Hiiraan oo dib u habeyn ku sameynaya garoonka kubadda cagta Baladweyne - Halbeeg News
BALADWEYNE(HALBEEG)- Ururadda dhalinyaradda iyo olonbikadda gobolka Hiiraan oo kaashanaya maamulka gobolka ayaa bilaabay dib u habeyn lagu sameynayo garoonka kubadda cagta Laqanyo ee magaalada Baladweyne.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullahi Axmed Maalin iyo dhalinyaradda gobolka ayaa ololahan si wada jir ah uga qeyb qaadanaya iyaggo jaray geedi jiniga oo inta badan ka baxay garoonka kubadda cagta.
Guddoomiyaha ururka dhalinyaradda gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulahi Buraale ayaa sheegay inay iyaggo kaashanaya maamulka iyo qurbo joogta reer Hiiraan dhawaan ay dhigi doonaan cowska loogu talo galay garoonnnada kubadda cagta, si loogu qabto tartannada degmooyinka gobolka.
“Sida aad aragtan hadda waxaan bilownay annago kaashaneyna maamulka gobolka Hiiraan, waxaan dhawaan rajeyneynaa in la dhigo cowska garoomada loogu talo galay, hadda waxaa laga jaraya geed jiniga oo ka baxay garoonka” ayuu yiri guddoomiyaha ururka dhalinyaradda gobolka Hiiraan.
Saadaq Cumar Carte guddoomiyaha olonbikadda gobolka Hiiraan ayaa uga mahad celiyay maamulka gobolka iyo dhalinyaro is xilqaamay oo ka qeyb qaadaneysa dib u habeynta lagu sameynayo garoonka kubadda cagta Laqanyo.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulahi Axmed Maalin ayaa sheegay in garoonkan uu muhiim u yahay is dhax galka bulshada islamarkaana maamulka uu kaalin ka qaadan doono sidii garoonka dib u habeyn loogu sameyn lahaa.
Sidoo kale Cabdulahi Axmed Maalin ayaa tilmaamay in dhawaan si wada jir ah ay qaban doonaan maamulka iyo dhalinyaradda tartano isboorti.
“Garoonkan kubadda cagta wuxuu muhiim u yahay dhalinyaradda, waxaan qaban doonaan tartan aan horey deegaanka looga qaban, si dhalinyaradda looga ilaaliyo tahriibka” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Garoonka kubadda cagta magaalada Baladweyne oo loogu magaca daray danjirihii dowladda Soomaaliya u fadhin jiray dalka Itoobiya Cabdikariin Faarax Laqanayo kaasoo ku geeriyooday qarax isaga iyo wasiirkii amniga qaranka Cumar Xaashi lagu dilay oo ka dhacay Baladweyne sannadkii 2009-kii, ayaa waxaa xiligan u baahan dib u habeyn lagu sameeyo gaar ahaan in la dhigo rooga cowska ee loogu talo galay garoomada ciyaaraha.